ငယ်ငယ်တုန်းကနာမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငယ်ငယ်တုန်းကနာမည်
Posted by ထာဝရ on Jun 23, 2011 in Copy/Paste | 21 comments
ကျွန်တော်ကလူသစ်ဆိုပေမယ်. နေ.တိုင်းနီးပါး ရွာထဲကိုဝင်ပြီး
စာတွေဝင်ဖတ်ရင်းနဲ. ကိုကြောင်ကြီးရဲ.နာမည်ကိုတွေ.တော. ငယ်ငယ်တုန်းကအိမ်ကလူတွေခေါ်ဖူးတဲ.ငယ်နာမယ်လေးကိုသတိရမိသွားတယ်လေ
သူ.လိုတော.ကိုဘစ်ကက်မဟုတ်ဘူး နာမည်ကိုကလှတာ ဟသာင်္ တဲ.လူကလဲ၂တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြူဖြူချောချောလေးလေ
အဲဒီလိုကျွန်တော.ကို ဟသာင်္ ဟသာင်္နဲ .ခေါ်ကြတော. တခြားအပြင်ကလူတွေက
အော်သူ.အိမ်ကလူတွေက ကို.ငါးချဉ် ကိုချင်နေကြတယ်လို.ထင်ကြတယ်
ဟသာင်္လို. နာမည်တွင်ခဲ.ရတဲ. တကယ်အဖြစ်မှန်ကို ဖွင်.ပြောရရင်တော.
ကျွန်တော်က ၂တန်းအောင်၃တန်းတက်မယ်.အချိန် အိမ်မှာ လူတွေစုံတဲ.အချိန်ကောင်းမှာ ကိုဘယ်လောက်စာတတ်နေပြီလဲ ကြွားချင်တော.
သတင်းစာကိုကိုင်ပြီးအကျယ်ကြီးဖတ်နေတာ အဖေ ရောအမေရော အမတွေရော
အားလုံးက၀ိုင်းကြည်.နေတာပေါ.အဲဒီမှာ သတင်းတပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်တော. တအိမ်လုံး ၀ါးကနဲဝိုင်းရီလိုက်ကြတာအတောမသတ်ဘဲ ပြိးတော.အဲဒီကထဲက ဟသာင်္ဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတော.တာဘဲ ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ.သတင်းကဟသာင်္တမြို.မှာရေကြီးတဲ.သတင်း ခေါင်းစဉ်ကို
အော်ဖတ်လိုက်တာ ဟသာင်္ တမြို.မှာရေကြီးနေပြီဆိုပြီး ဟသာင်္တက်ု ခွဲပြီးအော်ဖတ်မိဘဲ
ဟင်္သာ………တမြို့ မှာ ရေကြီးနေဘီ
ဟင်္သာ ဆိုတဲ့ နာမည်လေးလည်း လှတာပဲ..
ပြောမှပဲ ကျောင်းတုန်းက ၈၀ ဒီဂရီ ကျောက်ကို သွားသတိရတယ်။ ဆရာစာသင်တုန်ုးက သူငယ်ချင်းက သေသေချာချာ နားမထောင်ပဲ စာဖတ်ခိုင်းတော့မှ ဂဝံကျောက်ကို ၈၀ ဒီဂရီကျောက်လို့ သူငယ်ချင်းက မှားဖတ်လို့ သူ့နာမည် ၈၀ ဒီဂရီ ဖြစ်သွားလေရဲ့။
Snowy တို့ငယ်ငယ်တုံးကလဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျူရှင်မှာ စာကျက်တော့ “ဆရာမ….. ပြနည်းမကျ” ဆိုပြီးဖတ်လိုက်တာ ကျူရှင်တစ်ခုလုံးကလူတွေ ရီလိုက်ရတာ ၀က်ဝက်ကွဲပဲ :D
နွယ်ပင်ကတော့ ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကိုရစ်တက်လွန်းလို့ နွယ်ပင်ဆိုတဲ့ နာမည်ရသွားပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဒီနာမည်လေးက လှတော့ သဘောကျတယ် ဒါကြောင့် ဒီမှာ မန်ဘာဝင်တော့လဲ
နွယ်ပင်ဆိုပြီး ပေးဖြစ်သွားတယ် ။
အင်း တစ်ပင်ထဲ ရင်ထဲက နွယ် ကတော့ သီချင်းနာမည် ဗျ ။
ဟိဟိ :D :D :D
မမှီ သူငယ်ချင်းကတော့ good ရဲ့ v2 က ဘာလဲလို့ ဆရာမက မေးတာကို gooder လို့ ပြန်ဖြေတာနဲ့ အခု အသက်ကြီးတဲ့အထိ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို gooder လို့ ခေါ်တုန်း။
” လူကလဲ၂တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြူဖြူချောချောလေးလေ ” အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ငယ်နာမည်အကြောင်း ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးနော်
candy ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းက နာမည်အရင်းက အက္ခရာ ၃လုံးပါ။
ဒါပေမယ့် ဗေဒင်အရဆိုပြီးပြင်လိုက်တော့ အက္ခရာ နှစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်။
အိမ်နာမည်ကတော့ ဆူဇူကီး ပါ။
ကိုပေါက်အဖွားကတော့ ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ဖြစ်အောင် ကိုပေါက်တဲ့.။
သူငယ်ချင်းများအကြားမှာတော့ ပေါက်ကရပြော ပေါက်ကရတွေလုပ်လို့ နာမယ်နဲ့လိုက်တဲ့ ကိုပေါက် တဲ့။
ဟောအခုရွာထဲမှာလာ ပညတ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ ပေါက်ကရတွေရေးနေတဲ့
တူလေးတယောက် ကတော့ သူငယ်ငယ်က ဝင်္ကပါ ဘာ ထဲက တို့နှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားကို ၀က်ကမ္ဘာထဲ က တို့နှစ်ယောက် ဆိုပြီး ဖတ်မိလို့ သူ့ကို ၀က်ကမ္ဘာလေးဆို ပြီး စတတ်ကြတယ်
Bangkok Dangerousမှာ..ဟိုဟာ……ရောင်းတဲ့ (Nicolas ) Cage ကို အစွဲပြုပြီး
အင်းယားလမ်းထောင့်ကအိမ်ပိုင်ရှင်ကို Cage လို့ ခေါ်ပါတယ်။
…..ကို မြောက်ကိုးရီးယားက Kim လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျနော် ၄ တန်းတုန်းက အဲဒီ ဂ၀ံ ကျောက်ဘဲဒုက္ခပေးတာ …။
ကျနော်က သချာင်္ညံ့တယ် ပုစ္ဆာမှာ အလျှားပေးတယ် အနံပေးတယ် ဂ၀ံကျောက်ခင်းခိုင်းတယ်
ကျနော်တို့က ဘာလာ လာ တခုခုတော့လုပ်ရမှာဘဲဆိုပြီး နောက်ဆုံး ဂ၀နဲ့ မြှောက်လိုက်တယ်
အဲဒီနှစ်က ၄ တန်းကျရော။ တသက်မှာတခါ အဲဒီ၎ တန်းကျမှ ကျရတယ်။
တနေ့ အမ အငယ်ရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ(လက်ရေးနဲ့ကူးထားတဲ့) သီချင်းစာအုပ်ကလေးတွေ့လို့ ကစ်ထားလိုက်တယ်။
ညီလေးကိုသိပ်တော့မယ်ဆိုတော့ သီချင်းစာအုပ်ကလေးထုတ်ပြီး ကမန်းကတမ်းလှန်မိတဲ့စာမျက်နှာက သီချင်းလေးကိုကောက်ဆို(ဖတ်) လိုက်တယ်။
“ ခွန်နှစ်ရာ့ခြောက်ဆယ် ….ခွန်နှစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်…..”
တကယ်က မင်းအောင်ရဲ့ မင်းသားလေးလိုလွမ်းပြမယ်သီချင်း ..
(ရဝေ ရဝေ …အော်မြိုင်စောင်းမှာလ … ဥဒေါင်းတွေ….) ဆိုတဲ့သီချင်း..
အဲဒီကစလို့ ကျွန်တော့်ငယ်နာမည် “ ရှပ်ပြာ ”…… တဲ့….။
မဆလခေတ်တုန်းက သင်္ကြန်ဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလှည့်ကောက်ပြီး သံချပ်ဆုပေးမဏ္ဍပ် ဆောက်တယ်။ အဖွဲ့မှာ ဘာမှမဟုတ်ဘဲ ဟိုပါဒီပါယောင်တဲ့ လူတယောက်ကို အမြဲမူးနေလို့ ဗိုလ်မှူးလို့ မပီတပီခေါ်ကြတယ်။ တကယ်ထင်ပြီး လာပြိုင်တဲ့အသင်းလူကြီးတွေက သူ့တွေ့ရင် ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံကြလို့ ကွယ်ရာမှာ ပြန်ဟားကြတာ မှတ်မိတယ်။
နတ်သမီး ဦးလေးတစ်ယောက်နာမည်က ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ သူ့မျက်နှာက ဆယ်ပြားစိပုံစံနဲ့တူလို့ သူ့ကို အိမ်က နောက်ပြီး ဆယ်ပြားလို့ခေါ်တာ၊ အခု အသက် ၅၀ ကျော်အထိ သူ့နာမည်ကို ဦးဆယ်ပြားပဲ လူသိများကြတယ်။
အမှန်တော့လည်း ငယ်နာမည်ကို သုံးမှပဲ ခင်မင်မှုက ပိုသလိုပဲ။ ငယ်နာမည်ဆိုတာကလည်း ပျောက်ခဲသားကလား။ အသိတစ်ယောက်က အသားအရမ်းဖြူပြီး ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်မို့ ဗျိုင်းတောင်လို့ခေါ်တာ ကြီးလာတော့လည်း ရင်းနှီးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ အဲဒီနာမည်ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူကလည်း ငယ်ငယ်က အဲဒီနာမည်ခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးပေမယ့် အသက်ကြီးလာတော့ သူ့ကို ဗျိုင်းတောင်လို့ခေါ်ရင် ပိုရင်းနှီးသလို ခံစားရတယ်တဲ့။
ဦးလေး ဟင်္သာ ရဲ့ အသက် က ၅၂ ၅၃ လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်နော်။ ဟုတ်တယ်မလား
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ (လှိုင်မှာ ၂နှစ် မိန်းမှာ ၂နှစ် ) ၄နှစ်တက်ပြီး
သေချာတာကတော. ဆူးထက်ပိုကြီးတာဘဲ… အသက်..အသက်….
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပို့စ်ကဒ် ရောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ၀ယ်လာတယ်။ ကဒ်မှာ ဘာရေးထားလဲ မေးကြည့်တော့ အာလူးသမားနေ့တဲ့။ ရီလိုက်ရတာ..ဟား ဟား ဟား နဲ့။ ရာဇ၀င်တွင်သွားတာပဲ။